Vivo S5 waxay la muuqataa kamarad ololeysa tiva seddex laab gadaal ah | Androidsis
Iyada oo leh kamarad gadaal xiise leh iyo nashqad nasab ah, Vivo S5 ayaa ka muuqata boorkeeda rasmiga ah ee rasmiga ah
Waxaan ku jirnaa casri ay inta badan taleefannada casriga ah inta badan la shaaciyo lana soo saaro. Xiaomi, si aan tusaale u soo qaato, ayaa dhawaanahan la shaqeynayay My CC9 Pro y Xusuusinkayga 10, kuwaas oo ah aalado isku mid ah, laakiin dib loo beddelay, haa. Vivo sidoo kale waa shirkad kale oo la jirtay Vivo Y19 y Y5s, qalabka aan sidoo kale dib u eegnay. Shirkadan ugu dambeysay, si ay usii wado safka, waxay leedahay terminal kale oo la qorsheeyay muddo yar, waana tan Vivo s5.
Xarrago iyo bilicsanaanta gaarka ah ee moobiilkani waa mid ka mid ah faahfaahinta ugu xiisaha badan ee ku saabsan, iyo boodhadh cusub taas oo daaha laga rogay waxay muujinaysaa wixii la yidhi, maaddaama oo wax-soo-saareyaashu ay u reebayaan meel yar fikirka.
Su'aal ahaan, soo saaraha Shiinaha, si uu dhadhan fiican uga tago afka dadka isticmaala xamaasada sida hordhaca ah, wuxuu daabacay shaashadda rasmiga ah ee Vivo S5. Tani way fiiqaysaa waxayna kuu oggolaanaysaa inaad si faahfaahsan u sharaxdo dhammaan bilicsanaanta heerka dhexe.
Qaybta sawirka ee qaabkani ku faano ayaa xoogaa soo jiidasho leh. Sida caadiga ah caadiyan, waxay ka kooban tahay saddex kamaradood iyo toosh LED ah. Dareeraha kamaraddu wuxuu ku yaal meel ka hooseysa moduleka, bannaanka, halka iftiinka LED-ka ee kor lagu soo sheegay uu taagan yahay dhinaca bidix, gudaha, iyo labada kale.
Shaashadda ay ku taal Vivo S5 waxay ku faantaa jibbaarro aad u yar, iyo sidoo kale dalool ku dhaca qaybta bidix ee sare oo ay ku dhegsan tahay dareeraha kamaradda sawir-qaadaha. Muuqaal kale oo sidoo kale lagu arki karo aaladda hore ee mobilada ayaa ah akhristaha faaraha faraha ee ku dhexjira shaashadda. Qaybta dambe waxay noo sheegaysaa in guddiga shirkadda Shiinaha u tiirsan tahay ay tahay farsamada AMOLED.
Taariikhda sii deynta hadda waa rasmi, taas oo loo qorsheeyay Nofeembar 14, taariikhda hal asbuuc un ay naga xigto Waxaa sidoo kale la filayaa inuu la yimaado Snapdragon 712 gudaha ku jira ilaa 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah. Shaashadu waxay noqon doontaa 6.44-inch FullHD + iyo, markeeda, 4.010 mAh batari ah ayaa lagu heli doonaa iyadoo lagu taageerayo lacag-bixinta degdegga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Iyada oo leh kamarad gadaal xiise leh iyo nashqad nasab ah, Vivo S5 ayaa ka muuqata boorkeeda rasmiga ah ee rasmiga ah
Google Play wuxuu la shaqeyn doonaa ESET, Lookout iyo Zimperium si loola dagaallamo khayaanada
Kuwani waa qeexitaannada xaday iyo qiimaha Oppo Reno 3